avril 2018 – filazantsaramada
NY FANAHY NO MIFONA HO ANTSIKA
« Fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Roana 8:26b Hoy ny mpianatra iray tamin’i Jesosy: mampianara anay hivavaka. Teo Jesosy no nampianatra ny Ray o izay any andanitra. Tsy fantatsika tokoa izay vavaka tokony ataontsika. – Mbola mampiseho ny fitiavany antsika indray koa eto Andriamanitra. […]
Publié parfilazantsaramada avril 27, 2018 avril 27, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANAHY NO MIFONA HO ANTSIKA
« Izaho no vavahady; raha izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » Jaona 10:9. Tsy foin’Andriamanitra isika ka nanolotra ny tenany Izy ho antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany ho vavahady. – Amin’ny lafiny iray dia fanetren-tena avy aminy izany, satria dikaina mandrakariva […]
Publié parfilazantsaramada avril 20, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JEHOVAH MANDINIDINIKA NY ONDRINY
« Izaho no mpiandry tsara. » Jaona 10:11 Jesosy dia manambara tena ho mpiandry tsara. Raha amin’ny maha-olombelona antsika dia mampisalasala tokoa ny manambara tena, raha tsy hoe angaha ireo olona efa mpirehareha ka tsy manampahendrena. Ny Soratra Masina aza dia milaza fa raha mikasa hanao zavatra dia tokony ho lazaina: raha sitrapon’Andriamanitra. Eto Jesosy dia tsy […]
Publié parfilazantsaramada avril 13, 2018 avril 27, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPIANDRY ONDRY
FA NY FANAHY NO MIFONA
« Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny ny Fanahy, satria araka an’Andriamanitra ny fifonany ho an’ny olona masina. » Romana 8:27 Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa, ary Izy no afaka mandinika ny fo. Koa raha mandinika ny fo Izy dia mahalala ny hevitry ny Fanahy. Ny olona manana ny […]
Publié parfilazantsaramada avril 6, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FA NY FANAHY NO MIFONA